Technogym sy ny sisa amin'ireo mpanamboatra dia efa nanampy milina maherin'ny 5.000 mifanaraka amin'ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Technogym sy ny sisa amin'ireo mpanamboatra dia efa nanampy milina maherin'ny 5.000 mifanaraka amin'ny Apple Watch
Toa misy ifandraisany tokoa izahay, raha jerena fa vitsy ny gym no afaka manana milina manara-penitra izay mifanentana amin'ny fampiharana Gymkit na izay mitovy aminy. Raha izany dia anisan'ireo mpanamboatra malaza indrindra ny Technogym, izay ao anatin'ny fito izay manampy fampifanarahana ity serivisy ity ary manana milina bebe kokoa ianao ao amin'ny faritany.
Miharihary fa miparitaka miadana nefa tsy miova io. Porofon'izany ny tarehimarika natolotry ny orinasan'ny milina fanaovana fanatanjahan-tena mihitsy ary azontsika jerena ao anatiny tranokala manokana. Toy ny nampitandremanay tamin'ny fanombohana Ity dia olana ara-toekarena kokoa noho ny faniriana hivelatraSatria ireo milina ireo matetika no lafo indrindra eny an-tsena ary tsy hita ao amin'ny gym rehetra.
watchOS 4.1 nanampy GymKit
Ity no dingana voalohany, ny fananana fampiharana mifanentana amin'ireo masinina fanaovana fanatanjahan-tena ireo hanentanana ireo mpampiasa hahafahan'izy ireo manao zarao ny hetsika ara-batana, ny tahan'ny fitempon'ny fonao, ny hafainganam-pandehanao na ny tanjanao amin'ireo angona hafa mivantana miaraka amin'ny famataranandro ary rehefa mivoaka ny masinina dia esorina mivantana.
Amin'io lafiny io, fanentanana tsara ny mandrisika ny mpampiasa hilalao fanatanjahan-tena, fa hatramin'izao dia tsy misy afa-tsy amin'ny gym izy ireo any Australi, United Kingdom ary New York, ankehitriny dia mitohy miparitaka manerana ny faritra sisa ary efa mihoatra ny milina mifanentana amin'ny 5.000 amin'ny gym maro karazana manerantany izy ireo. Ny gym voalohany izay manana milina mifanaraka amin'ity asan'ny Apple Watch ity dia tonga tany Aostralia ary ny fanitarana dia miadana kokoa noho ny maro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Technogym sy ny sisa amin'ireo mpanamboatra dia efa nanampy milina maherin'ny 5.000 mifanaraka amin'ny Apple Watch
Rise of the Tomb Raider: fankalazana 20 taona izao azo alaina mialoha